वोलमुट कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु - कुकुरहरु
वोलमुट कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु
टिम्बर वुल्फ (ग्रे वुल्फ) / अलास्का मालामुट मिश्रित जातका कुकुरहरू
1 वर्ष पुरानो केएल द वोलुमेट (अलास्का मालामुट / टिम्बर वुल्फ संकर)
वोलमुट शुद्ध कुकुर होईन। यो बीचको क्रस हो टिम्बर वुल्फ भनिन्छ ग्रे वुल्फ र अलास्का मालामुटे । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। वुल्फ हाइब्रिडको स्वामित्व हुने जो कोहीले सिक्नको लागि अतिरिक्त समय लिनुपर्दछ जनावरको प्राकृतिक प्रवृत्ति र व्यवहार । यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरिंदैन 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
Ke बर्षको उमेरमा Zeke The Wlamute 'यो Zeke महान नाशकर्ता हो। (मेरो year बर्षको उमेर उनलाई दर्साउँछ) ऊ एक मान्छे माग्ने सब भन्दा राम्रो साथी हो। धेरै जसो साथीहरू जस्तो उसले समय समयमा तपाईंलाई निराश तुल्याउन सक्छ। ऊ पक्कै घरपालुवा वर्गको तुलनामा साथीमा पर्दछ। जो कोहीले मलाई वुल्फडगको स्वामित्वको बारेमा सोधेको म स्पष्ट स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दछु। मैले मेरो कुकुरको साथ उजाडस्थानमा बसेको एक बर्ष भन्दा बढी बिताएको छु। जब सम्म तपाईं यस किसिमको प्रतिबद्धतालाई कष्ट दिन तयार हुनुहुन्छ।
कालो र सेतो हभानीस पिल्ला
यो लाइका हो, एक वुल्फ / मालामुट क्रस जुन एकदम सुन्दर छ! उनी एक अद्भुत साथी छन् र यद्यपि अत्यधिक इच्छाशक्ति र स्किटिश, उनी एक मीठो र राम्रो-हास्य पाल्तु हो।
२ बर्षको उमेरमा लोगान वुलामुट 'उहाँ एक मालामुट / टिम्बर वुल्फ क्रस हुनुहुन्छ, र म विश्वास गर्दछु कि उहाँ मसँग स्वामित्व पाउनु भएको सबैभन्दा सुन्दर प्राणी हो .... ऊ लगभग १०० एलबीएस हो। धेरै कडा कुख्यात कुकुर को, र एक कोर्रा जस्तै तेज! उनले उत्तरमा ओन्टारियोमा ब्यारीको नजिकमा 'अल्फा पाव' मा पूर्ण प्रशिक्षण लिएको थियो जुन कुकुर बुट क्याम्पको जस्तै छ। त्यो मानिस जसले हामीलाई लोगानलाई प्रशिक्षण दिन मद्दत गर्‍यो र धेरै दृढ विल्सको साथ समस्या कुकुरहरूमा विशेषज्ञता प्रदान गर्‍यो। म यो कार्यक्रम कसैलाई सिफारिस गर्दछु तपाईंको कुकुरले यस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ कि यसले तपाईंलाई चकित पार्नेछ!
आफ्नो प्रशिक्षण पछि, लोगान अब धेरै परिवार र हाम्रो परिवारलाई मायालु छ। विशेष गरी म र मेरी आमाको। उसलाई थाहा छ घरको मालिक को हो, तर श .्कास्पद लाग्नेहरुका वरिपरि हामीसँग कडा सुरक्षा गर्छ। ^ _ ^ लोगनले मेरो जीवन पनि करीव months महिना अगाडि सुरक्षित गर्‍यो। म खानाको टुक्रामा घिसदै थिएँ, एक्लै मेरो घरमा ... म घबराएँ र के गर्ने मलाई थाहा भएन। म अन्ततः थकाइबाट भुइँमा खस्यो र उसले मेरो पेटमा हान्यो, जसले गर्दा म चुहावट खाएँ र खाना खान्नुभयो। म स्तब्ध भए, र कृतज्ञ! ऊ उत्तम कुकुर हो उसले मैले आशा गरेको आशा गर्न सकिनँ म उनलाई खुशीले खुशी छु। ऊ मेरो जीवनमा साँचो आशिष भएको छ र म उसलाई धेरै माया गर्छु। '
आयरिश वुल्फहाउन्ड महान डेन मिक्स
२ वर्ष पुरानो लोगान वुलामुट (अलास्का मालामुट / टिम्बर वुल्फ संकर)
युवा पिल्लाको रूपमा लोगान वुलामुट (अलास्का मालामुटे / टिम्बर वुल्फ संकर)
कुकुरको तस्वीर खोज्नुहोस्
हिउँबाट जोगाउन इनोकसँग धेरै मांसपेशीहरू, वेबबेड खुट्टाहरू, डबल भौौं र कानमा कोट भएको लामो र बाक्लो घाँटी छ। मानवको लागि विश्वासयोग्य, जबसम्म तपाईं अल्फा नर हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो धेरै वफादार र संरक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ व्यक्ति र बच्चाहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यो मैले उसलाई हुर्काएको बाटो हो जस्तो अनुमान लगाउनुहोस्। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, काठ ब्वाँसोहरू सुरक्षा र बाँडफाँड गर्न, इनुइट गाउँहरूमा हुर्केका थिए। उनीसँग डबल कोट पनि छ, जुन अहिलेको जनवरीमा आउँदैछ जस्तो कि कसैको व्यवसायमा मसँग यसको झोलाहरू छैन। म यो स्पिन सक्छ कि कसैलाई चिनेको थियो। उसले खाना पकाएको कुखुरा खान्छ, हड्डी लगायतका, जुन उसको आहारको भाग हो, साथै गाईको मासु र थुमा पनि। सुँगुर र दुग्धले उसलाई व्याकुल बनाउनेछ। इमान्दार हुन उसले म भन्दा राम्रो खाए। तर ऊ मेरो साथी र साथी हो। म उसलाई इनक भन्छु, जुन In्यूट बाट एकल मा मतलब वास्तविक व्यक्ति हो। '
मास्टिफ बर्न्नेस पहाड कुकुर मिक्स
वोलुमेटको अधिक उदाहरणहरू हेर्नुहोस्
वोलमुट चित्रहरु १
टिम्बर वुल्फ मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
अलास्का मालामुट मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
डोमेस्टिक डग मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
वुल्फ हाइब्रिड जानकारी
गैर-वुल्फडगहरू: गलत पहिचान
सीमा पोम कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु
मौक्सी डग ब्रीड जानकारी र तस्वीरहरू
अमेरिकी पिटबुल टेरियर कुकुर जातका चित्र,।
Basure कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु
Pughasa कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरु
स्की-बोर्डर डग ब्रिड जानकारी र चित्रहरू
Aussie साइबेरियन कुकुर जातको जानकारी
स्लोभाक कुवाक डग ब्रीड जानकारी र चित्रहरू
रजत लैब्राडोर रिट्रीवर कुकुर जातको जानकारी
लाब्राडोर रिट्रिभर पिट बैल टेरियर मिक्स
अमेरिकी नीलो नाक पिट बैल टेरियर
ज्याक रसल टेरियर चिहुआहुआ कालो र सेतो मिक्स गर्नुहोस्
बिक्रीको लागि संत डेन पपीहरू
घोडचढी राजा चार्ल्स पूडल मिक्स
निलो आँखा चकलेट ल्याब पपीहरू